कारोबार रकम सहित ४.६९ अंकले घटेको नेप्सेमा ५८ करोडको कारोबार, कुन चार कम्पनीको मूल्यमा भयो तिव्र वृद्धि ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण कारोबार रकम सहित ४.६९ अंकले घटेको नेप्सेमा ५८ करोडको कारोबार, कुन चार कम्पनीको मूल्यमा भयो तिव्र वृद्धि ?
on: June 06, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
कारोबार रकम सहित ४.६९ अंकले घटेको नेप्सेमा ५८ करोडको कारोबार, कुन चार कम्पनीको मूल्यमा भयो तिव्र वृद्धि ?
लगातार चार दिनमा ३४.८८ अंकले घट्दा नेप्से १२८४.५९ विन्दुमा
जेठ २३, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से ४ दशमलव ६९ अंकले घटेर १ हजार २८४ दशमलव ५९ विन्दुमा बन्द भएको छ । १ हजार २९६ दशमलव ४२ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक २३ मिनेटसम्म बढेको थयो भने सो पछि घटेर बन्द भएको छ । कारोबार भएको २३ मिनेटसम्म सुचारु भएको नेप्से सो पछि नेप्सेको वेबसाइटमा प्राविधिक समस्या आएकाले दुई घण्टासम्म कारोबार रकम हेर्न सकिएको थिएन ।
आइतवारदेखि घटेको नेप्से परिसूचक बिहीवारसम्म घटेर बन्द भएको छ । बुधवार सार्वजनिक बिदाका कारण नेप्से कारोबार भएको थिएन । चार दिन भएको कारोबारमा नेप्से ३४ दशमलव ८८ अंकले घटेको छ । बिहीवारको बजारमा खरीद कर्ता र विक्री कर्ताहरु समान रहेका छन् । मर्जर प्रक्रियाले गर्दै कम मूल्य र पूँजी भएका कम्पनीहरुको शेयर लगानीकर्ताहरुले बढी माग गरेको पाइएको छ ।
कारोबार अवधिभर १२ समूहको परिसूचकमा होटल, विकास, वित्त, अन्य र म्युचुअल फण्ड समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाकी समूहको परिसूचक घट्दा समग्र नेप्से परिसूचक शुन्य दशमलव ३६ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ ।
यस दिन रू. ५८ करोड ८८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिनका कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा १७ दशमलव ७० प्रतिशत घटेको हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन शून्य दशमलव ९७ अंक घटेर २७३ दशमलव ८९ विन्दुमा बन्द भएको छ । कारोबार भएका १७२ कम्पनीमा ४९ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ९८ कम्पनीको घटेको छ । साथै, २५ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ ।
चार कम्पनीको मूल्यमा तिव्र वृद्धि
बिहीवारको कारोबारमा चार कम्पनीको मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । कर्पोरेट डेभलपमेण्टको ९ दशमलव ६५ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. १२५ पुगेको छ भने गुडविल फाइनान्सको ९ दशमलव ६० बढेर प्रतिकित्ता रू. १३७, वल्र्ड मर्चेण्ट बैंकिङको ९ दशमलव ५२ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. ९२ र कर्णाली विकासको ९ दशमलव ४० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. १२८ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थ एक आपसमा गाभिदै गएका बेलामा फाइनान्स कम्पनीहहरु पनि मर्जरको तयारीमा रहेका छन् । जसले गर्दा साना पूँजी र कम मूल्य भएका कम्पनीहरुको खरीद चाप बढ्न थालेको छ । पाँचथर पावर कम्पनीको शेयर मूल्य ५ प्रतिशत घटेर रू. १३० पुगेको छ ।
शिवम् सिमेण्टको शेयरमा आकर्षित लगानीकर्ता लगातार सर्वाधिक कारोबार
दिनभरिको कारोबारमा शिवम् सिमेण्टको सर्वाधिक रू. ७ करोड ७६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ३ ले बढेर रू. ६७८ पुगेको छ । कम्पनीको यस दिन १ लाख १४ हजार ३०४ कित्ता शेयरको कारोबार भएको हो । कम्पनीको ५ सय ६३ पटक कारोबार भएको छ । दोस्रोमा कैलाश विकास बैंकको रू. ४ करोड २३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. २३८ रहेको छ ।
दोस्रो घण्टा ६.०७ अंकले घट्यो नेप्से, सबैभन्दा बढी निर्जीवन र लघुवित्तको शेयर मूल्य घट्यो (१ बजेको अपडेट)
१२ समूहको परिसूचक घट्दा एक घण्टामा ५.९९ अंकले घट्यो नेप्से (१२ बजेको अपडेट)
बजेट भाषणपछि नेप्से ४४ अंकले घट्यो, हाइड्रोपावरको शेयरमा आकर्षित हुँदै लगानीकर्ता